China Charmlite Tumbler ọhụrụ nke na-ekpo ọkụ maka mmiri ọ Hotụ andụ ma okpomoku 16 Ounce - Ndị na - emepụta BPA na ndị na - eweta ya n'efu | Charmlite
Charmlite Tumbler Ọhụrụ Ndị Na-ekpo ọkụ Ma Ihe Ọ andụ Hotụ Na-ekpo ọkụ ma Oyi 16 Ounce - BPA n'efu
Charmlite 2020 ọhụụ eji edozi tumbler iko. Anyị nwere ike ime ya ma ọ bụ na-enweghị mkpuchi dịka ihe ndị ahịa chọrọ. Ugba a na BPA na -efe efe n'efu, ndu na anaghị egbu egbu, enweghị isi na-egbu mmụọ. Ọ dị mma ma ihe ọ drinksụ hotụ na-ekpo ọkụ ma nke oyi. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịnye nkwakọ ngwaahịa igbe ahaziri ahaziri.
2.Mate: Plastic (AS)
3.Feture: BPA n'efu, ọkwa nri
4.Color & Logo: Ahaziri
5.Manufacture: Festime Plastic
Nlele Nke: CL-DW007
Ebu amuru ohuru n’afọ 2020. More chic style design insulated tumbler. A na-ejikọ mgbidi abụọ ahụ site na ultrasonic.E nwere oghere na mkpuchi. Enwere ike itinye ahihia ebe a. Dị nnọọ adabara ndị ahịa. Ma dị mfe maka kpochapụ.
Tumbler a na-adọba adọta bụ nke nwere mgbidi abụọ, nke ultrasonic na-ekpuchi. Iko a zuru oke maka ihe ọ coldụ coldụ oyi. Ahụ agaghị adị gị mgbe ị na-ejide ya. Biko were ụyọkọ a mgbe gị na ndị enyi gị na-eme oriri ma ọ bụ na-eme mkpọsa. Ha mara mma site na foto. Na iko a reusable, ị nwere ike iji ha ọtụtụ oge.
Igwe a nwere ike ibute ihe ọidsụidsụ, nke nwere ike igbochi nsị nke ihe ọ .ụ .ụ. Enwere oghere n’elu mkpuchi. Oghere nwere ike imechi mgbe ị chọghị. Nwekwara ike ịhọrọ mkpuchi na-enweghị mkpuchi ma ọ bụrụ na ịchọghị mkpuchi. Maka mkpuchi ahụ, a na-adụ ọdụ ka ọ jiri ahịhịa ahịhịa reusable igwe anaghị agba ya.
Ikike zuru oke nke iko ahụ bụ ounce 16. Ọ bụ nha kachasị ewu ewu, dị mma maka mmadụ ọ bụla. Site na eserese dị n'elu, ọ bụrụ na ị na-acha ọcha na agba nke n'ime mgbidi ahụ, iko ahụ na-adịwanye ọ chụ. Echiche a mara mma maka ojiji ezinụlọ ma ọ bụ maka oriri. Onye ọ bụla nwere ike ịhọrọ ụcha kachasị amasị ya, ma echekwala ịtọghe iko a ọzọ.
Nke gara aga: Charmlite Insulated Double Tumbler Cup nke Lid & Reusable Straw - 16 oz - doro anya
Osote: Anụmanụ ụmụ anụmanụ nke Charmlite Cartoon 3D, na-eji aka nri, Cute Ice cream Mug Food Grade
Ibe kọfị iko abụọ
Ugboro abụọ iko Glass iko
Ugboro abụọ Wall Tea iko
Iko kọfị iko abụọ
Charmlite Mkpoko Ugwu Tumbler nke Ugbo abuo ...